VAOVAON’NY «CAN 2019» | NewsMada
1-Egypta : Nahoraka ary noraisina toy ny nandray filoham-panjakana na mpanjaka, ny fahatongavan’i Mohamed Salah, tany an-toerana.
2- Zimbaboe : Saika tsy nety hilalao, ny The Warriors n’i Zimbaboe, omaly nandritra ny lalao fanokafana, raha tsy nahazo ny tambiny (prime de qualification), nahatafakatra azy, amin’izao “Can 2019”, izao.
3-Kenya : Naneho ny hatezerany ireo mpilalaon’ny Harambee Stars-n’i Kenya, ka nitokona tsy nety nanao fanazarantena, satria tsy nisy “wi-fi”, tao amin’ny hotely, nisy azy ireo.
4-Tonizia : Ny ekipan’i Tonizia no voalaza fa zandriny indrindra, amin’ity Can 2019 ity, satria 24 taona, ny salantaon’izy ireo. Voalaza koa fa ny mpilalaon’i Tonizia, no betsaka tsara tarehy, ka mahasarika ireo tovovavy, any Egypta.
5- Kameronina : Mitaky volabe, amin’ny fanjakana kamerone, ireo mpilalaon’ny liona tsy voafolak’i Kameronina, raha tsy izay, tsy handray anjara amin’ny Can. Tranga, nampifamaly ireo mpilalao sy ny mpitantana. Manoloana izany, voatery niditra an-tsehatra nanao fanelanelanana ilay kintan’ny kitra kameroney, Samuel Eto’o.
6-Tanzania : Sahirana ara-bola ny ekipan’i Tanzania, amin’ity Can, ity. Vokatr’izay, mbola nanao fitadiavam-bola, izy ireo. Tsy nanomana teti-bola ho an’ny ekipam-pireneny mantsy ny fanjakana tanzanianina. Raha tsiahivina, mila 436 000 dôlara, izy ireo.
7- Araka ny fantatra, amin’ny lalao ampahefa-dalana sy manasa-dalana ary ny fiadian-toerana sy ny famaranana, vao ampiasaina ny “Assistance video” na ny (VAR).
8- Borondi : Noho ny toetra tsy mendrika sy ny fitondran-tena tsy manaja ny mpitantana, noroahina tao amin’ny ekipam-pirenen’i Borondi, i Ndikuman Yamuins. Efa nosoloina, ny toerany.
9- Caf : Hiatrika ny fitsarana eo anivon’ny kaomision’ny etikan’ny Fifa, i Ahmad, filohan’ny Caf. Araka izany, delegasiona manokana, no hitantana ny kaonfederasiona afrikanina, ka voatendry hitondra izany, i Fatima Samoura, sekretera jeneralin’ny Fifa. Hisy ny fanadihadiana, hatao amin’ny Caf.